Global Voices teny Malagasy » Sarimiaina Manazava Ny Fahefan’ny Fitsarana Afrikana Amin’ny Zon’ny Vahoaka sy ny Olombelona · Global Voices teny Malagasy » Print
Sarimiaina Manazava Ny Fahefan'ny Fitsarana Afrikana Amin'ny Zon'ny Vahoaka sy ny Olombelona
Voadika ny 19 Oktobra 2016 6:11 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Borkina Faso, Tanzania, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Namokatra sarimiaina YouTube  momba ny Fitsarana Afrikana misahana ny Zon'ny Vahoaka sy ny Olombelona ny Firenena Mikambana misahana ny Fanabeazana, Siansa sy ny Kolontsaina (UNESCO), ny Orinasa Federaly Alemaina mankamin'ny Fiarahamiasa Iraisampirenena ary ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Britanika Andininy faha-19.
Miorina ao Arusha, Tanzania, fitsarana kaontinantaly napetraky ny firenena Afrikana ny Fitsarana Afrikana misahana ny Zon'ny Vahoaka sy ny Olombelona mba hiantoka ny fiarovana ny zo ao Afrika. Mameno ny Vaomiera Afrikana misahana ny Zon'ny Olombelona sy ny Vahoaka ny Fitsarana. Raha manome tolo-kevitra fotsiny ny Vaomiera Afrikana, tsy maintsy ilaina kosa ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana.
Natsangana teo ambanin'ny Arofenitry ny Sata Afrikana momba ny Zon'ny Olombelona sy ny Vahoaka ao amin'ny Toeran'ny Fitsarana Afrikana misahana ny Zon'ny Olombelona sy ny Vahoaka ny fitsarana. Araka ny hita amin'ny lahatsary, raha ny tamin'ny Septambra 2016, firenena 30 ihany no nanasonia ny Arofenitra.
Milaza ny lahatsary fa efa nandray fanapahan-kevitra roa lehibe momba ny fahalalahana miteny any Afrika ny Fitsarana. Tamin'ny 2014, nanapa-kevitra ny Fitsarana  fa manitsakitsaka ny fahalalahana maneho hevitra ny fampidirana am-ponja noho ny fanalam-baraka. Tamin'io taona io ihany, nanome baiko ny fisokafan'ny fanadihadiana indray momba ny famonoana an'i Norbert Zongo , Burkinabe mpanao gazety mpanao fanadihadiana sady mpamoaka lahatsoratra ny Fitsarana.
Venezoeliana antsoina hoe Juan Carlos Hernández Ramirez  no mpanakanto nanatontosa ny sarimiaina.
Hita amin'ny teny Frantsay sy Arabo ihany koa ny lahatsary.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/19/90307/
 Fitsarana Afrikana misahana ny Zon'ny Vahoaka sy ny Olombelona : https://en.wikipedia.org/wiki/African_Court_on_Human_and_Peoples%27_Rights
 Vaomiera Afrikana misahana ny Zon'ny Olombelona sy ny Vahoaka : https://en.wikipedia.org/wiki/African_Commission_on_Human_and_Peoples
 nanapa-kevitra ny Fitsarana: http://www.pen-international.org/newsitems/african-court-imprisonment-for-defamation-violates-freedom-of-expression/
 nanome baiko ny fisokafan'ny fanadihadiana indray : https://www.opensocietyfoundations.org/voices/killing-norbert-zongo-african-court-stresses-state-obligation-protect-journalists
 Norbert Zongo: https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Zongo
 Juan Carlos Hernández Ramirez: http://jhernandezgraphic.com/?page_id=330&lang=en
 Frantsay : https://www.youtube.com/watch?v=7lh0x6x8M6Q&feature=youtu.be
 Arabo : https://www.youtube.com/watch?v=sdzQ7u_aCjY&feature=youtu.be